Dejinta Up iCloud Account on Android
Ma waxaad u bedesheen Android? Maxaad samayn haddii emails aad warsan weli waa la Apple? Haddii aad leedahay xisaab iCloud ah oo ka welwelsan ku saabsan badalista badan si Android, waa wax sahlan hadda. Guuray iCloud in Android Iyamaa hawl badan sidii hore.
Waynayn, labada nidaam fiican uma wada tusaaJe. Si kastaba ha ahaatee, Android kuu ogolaanaya in aad ku darto xisaabtaada email iCloud fudayd. Waxaa lagu dari karaa si ku-dhisay email app aad telefoonka ee sida account kasta oo xisbiga saddexaad kale email. Ku darista account email ah waa suurto gal maanta xataa haddii aad wareegaya Android. Ha ka walwalin haddii ay u muuqato adag - waxaad kaliya yeelan doonaan in ay soo galaan server ah xaq iyo macluumaad dekedda. Halkan waxaa ku qoran xoogaa tallaabooyin ah oo caawin doona in aad ku darto xisaabtaada email iCloud in qalab Android aad si fudud.
Tallaabada koowaad - fur App ah
Email app Stock kuu ogolaanaya in aad ku darto xisaab email xisbiga saddexaad. Tag in ay barnaamijyadooda iyo app Email furan qalabka Android aad. Tapp ku Settings button Menu iyo booqashada. Next, waxaad u leedahay in guji dar xisaabta.
Laga soo bilaabo talaabada labaad, waxaad bilaabi doonaa inuu ku soo bilowdo xisaabtaada iCloud u fidinno. On shaashadda soo socda, waa in aad soo gashid username ah (kuwaas oo u eg username@icloud.com) iyo sidoo kale gali xisaabtaada password iCloud. Ka dib markii ay soo galaan macluumaadka, waxaad u baahan tahay inay hesho on Mudanayaasha Manual. Xaaladaha qaarkood, xisaabtaada email iCloud u ekaan karaan sida xyz@icloud.com meesha xyz waa username ah.
On shaashadda soo socda, waxaad u baahan doontaa inaad doorato nooca xisaabtaada. Waxaad heli doontaa doorasho u dhexeeya POP3, IMAP iyo xisaab Microsoft Exchange ActiveSync. POP3 (Post Office Protocol) waa nooca ugu badan taas oo aad email waa laga saaray server marka aad hubiso email ah. IMAP (Internet Message Access Protocol) waa nooca xisaab email casriga ah, ka duwan POP3 ma email laga saaro server ilaa aad ka tirtirto email ah.
IMAP waxaa lagu talinayaa, si ka jaftaa kaliya IMAP ah. Waa in aan ogaado in POP iyo hab maamuuska EAS ma taageersana u iCloud.
In talaabo tan aad leedahay doontaa si ay macluumaad ah ee server socda iyo server ka sii tagaya. Tani waa talaabada ugu adag maxaa yeelay waxa ay u baahan tahay macluumaad gaar ah iyada oo aan taas idinka aawadiin uma shaqeyn doonaan. Waxaa jira dekadaha iyo server kala duwan aad u baahan tahay in ay galaan. Just galaan faahfaahin kuwaas oo aad ku fiican tahay inuu tago.
Macluumaadka soo socda ee Server
- Email qabashada Waxaad u baahan tahay in ay galaan buuxa cinwaanka email iCloud
- Username- gala username aad email iCloud
- Isgaradka Hadda, qortaa erayga sirta ah iCloud
- IMAP server-- ka gala imap.mail.me.com
- Security Type- SSL ama SSL (aqbalaan shahaadooyinka oo dhan) laakiin waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo SSL
- Port-gala 993
Macluumaadka Server xilka
- SMTP gala server-- smtp.mail.me.com
- Security Type- SSL ama TLS laakiin waxaa lagu talinayaa in TLS (aqbalaan shahaadooyinka oo dhan)
- Port-gala 587
- Username- gala username la mid ah sida aad email iCloud
- Isgaradka-gala password iCloud ah
Marka aad tagto screen soo socota, waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad u baahan tahay sugida SMTP. Haddaba, xulo Haa.
Waxaad ku dhawaad ​​sameeyo; tallaabada xigta oo dhan waa ku saabsan samaynta fursadaha xisaabtaada. Waxaad sameyn kartaa jadwalka u hagaagsan sida saacad kasta, ama waqti bareeg ah aad jeclaan lahayd. Waxa kale oo aad sameyn kartaa Jadwalka Fiinta aad u isku mid. Waxaa jira oo kale afar doorasho oo aad u baahan tahay si aad u hubiso "Email nidaameed", "email ka sidaa darteed dir by default", "ii sheeg marka email gaaray", iyo "Si toos ah kala soo bixi ku lifaaqan marka xiran Wi-Fi". Fiiri sida aad doorashada iyo ka jaftaa Next.
Waxaad haatan sameeyey! Shaashadda xigta waxay u hagaagsan account email si aad u iCloud iyo dejisan oo dhan emails ah. Haddaba waad arki kartaa email, oo ay ku jiraan tafatirka iyo iyaga maaraynta ka app email ah. Geedi socodka dhan qaadataa laba ilaa saddex daqiiqo. Way fududahay Dhammaan tallaabooyinka, kaliya iyaga raac sida ay tahay.
1. Had iyo jeer isticmaal hab maamuuska IMAP sida ay tahay hab maamuuska ugu isticmaalay, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u helaan emails aad ka macaamiisha kala duwan. Sidaa awgeed, haddii aad ka heli aad emails on qalabka kala duwan ka dibna IMAP waa maamuuska ugu fiican ee aad u. Si kastaba ha ahaatee, waxay hubineysaa in aad soo gashid faahfaahinta IMAP midig.
2. In talaabo saddex laguu macluumaad server ingoing iyo macluumaad server xilka galaya doonaa. Waxaad u baahan tahay in ay galaan dekedda xaq iyo cinwaanka server aan taas laga yaabaa in aadan awoodin in ay helaan account iCloud ka Android ah.
3. Haddii aad qorshaynaysid in aad u isticmaali badan Wi-Fi waxaad dooran kartaa fursadaha account email sida toos ah kala soo bixi ku lifaaqan marka xiran Wi-Fi. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaalayso xiriir internet firfircoon, aad uncheck karo Doorashadan. Haddii kale, waxaad sidoo kale uncheck kartaa fursadaha u hagaagsan si loo badbaadiyo macluumaadka. Waxaad gacanta u hagaagsan karaa app Email ah mar kasta oo aad u baahan tahay in aad hubiso emails.
4. Isku day inaad si ay u maareeyaan emails aad ka website-ka rasmiga ah iCloud, gaar ahaan halka la emails muhiim ah ka shaqeeya. Sida aad isticmaalayso macmiilka email Android si ay u helaan ka iCloud, maamul ama goob mudnaanta waa in la sameeyaa ka iCloud ah.
5. Had iyo jeer isticmaal SMTP sugida doorasho si hubineysaa in email la xaqiijisatay mar walba aad log in. Isku day in aad isticmaasho ah software ilaalinta virus wanaagsan ee aad Android si uu u badbaadiyo emails muhiim ah. Muhiimad, waa in aad taqaan aqoonsiga cinwaanka iCloud iyo mid kale ma jiro.
> Resource > iCloud > sida loo sameeyo iCloud Account on Your Android